विप्लवको आतंक र सरकारको लाचारी : समाधान के ? - Chinari Post
विप्लवको आतंक र सरकारको लाचारी : समाधान के ?
जेठ १३, काठमाण्डौ । नेत्र विक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपाले आज गरेको नेपाल बन्दले आंशिक प्रभाव परेको छ । हिजैदेखि विभिन्न स्थानमा बम विष्फोट भएपछि आजको बन्द प्रभावित हुनमा थप बल पुग्यो । केपी ओली नेतृत्वको सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको विप्लव समुहको यस्तो गतिविधिले नागरिकमा त्रास फैलिएको छ । यस्तो अवस्थामा अबको निकास के हुन सक्छ त ? यस विषयमा हामीले विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिको धारणा समावेश गरेका छौँ ।
नेपाली जनताले हत्या र हिंसा चाहेका छैनन् । विप्लव नेतृत्वको नेकपाले तत्काल आतंककारी गतिविधि रोक्नुपर्छ । सरकारले पनि दम्भ छाडेर असन्तुष्ट पक्षसँग वार्ताको लागि पहल गर्नुपर्छ ।
प्रा.डा. सुरेन्द्र केसी, राजनीतिक विश्लेषक
विप्लव नेतृत्वको नेकपाले उठाएका मुद्दा शान्ती सम्झौतामार्फत समाधान भइसकेको छ । तर फेरी पहिलाकै जस्तो सशस्त्र द्धन्द्ध दोहो¥याउन खोजेको जस्तो देखिएको छ । यस्तो अवस्थाले निरन्तरता पाए ठूलो दुर्घटना हुन सक्छ । त्यसैले सरकारले तत्काल वार्ताको सार्थक पहल गर्नु जरुरी छ । सहमति नै समाधानको बलियो अस्त्र हो ।
बेदुराम भुसाल , नेकपा नेता
नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपाले अहिले जे गरिरहेको छ, त्यसले समस्या समाधान हुँदैन । बम बिस्फोट तथा आतंक सृजना गरेर समस्याको समाधान नहुने निश्चित निश्चित छ । सरकारले पनि वार्ताको पहल थाल्नुपर्छ । विप्लवले पनि वार्तालाई बहिष्कार गर्नुहुँदैन ।
दिपाश्री निरौला , कलाकार
आफ्नै देशभित्रका दाजुभाइहरु मिलेर अगाडि बढ्नु नै राम्रो हुन्छ । बढिरहेको आतंकले नेपाली दाजुभाइको नै मृत्यु हुने हो । त्यसैले सरकार र विप्लव समुहबीच वार्ता हुनु जरुरी छ । वार्ता तथा सहमतिको लागि दुवै पक्षले प्रयास गर्नुपर्छ ।
सरोज सिटौला, महासचिव, यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ
भएभरका यातायात जलाउने तथा तोड्फोड गरुन्जेल पनि सरकारले केही गर्न सकेको छैन । एकातिर विप्लव समुहको विद्रोह मौलाउँदै गएको छ, अर्कोतिर सरकारले वार्तामा ल्याउन पर्याप्त पहल गरेको छैन । सरकारले विप्लवप्रतिको धारणामा परिवर्तन गरेर आतंक नियन्त्रण हुने वातावरण बनाउनसपर्छ । अब ढिला नगरि सरकारले विप्लव समुहलाई वार्तामा ल्याउनको लागि रणनिती बनाएर अगाडि बढ्नुपर्छ ।
राजेन्द्र रिजाल, उपाध्यक्ष, नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ
सर्वसाधारण मान्छे मारेर क्रान्तिको नाटक भइरहेको छ । विप्लव समुह (नेकपा) ले आतंकाकारी गतिविधि रोक्नुपर्छ । सरकार पनि नेकपालाई वार्तामा ल्याउनका लागि लचक बन्नुपर्छ । सरकार उदार बनेर समस्या समाधान खोज्नु जरुरी छ ।।
विज्ञानराज शर्मा, पूर्व डिआइजी
सुरक्षा संयन्त्रको प्रभावकारिता बढाएर नागरिकलाई त्रासबाट मुक्त गराउनुपर्छ । नेपालको सुरक्षा निकायलाई अझै बलियो र भरपर्दो बनाउनका लागि लगानीमा वृद्धि गर्नुपर्छ । विशेषगरी अपराधिक घटना नियन्त्रणका लागि पूर्व सुचना लिन सक्ने संयन्त्रको विकासमा ध्यान दिनुपर्छ । योसँगै असन्तुष्ट पक्षलाई वार्तामा ल्याउनका लागि पनि सरकारले प्रयास गर्नुपर्छ ।
आलोक रायमाझी, अध्यक्ष, अखिल क्रान्तिकारी
सबै कुरा सम्वादबाट नै सहकार्य हुने हुनाले सरकारले पनि बार्ताको लागि पहल गर्नुपर्छ । तर सरकारले वाहिर बार्ताको लागि पहल गरे झै गर्ने तर भित्रैदेखि भने वार्तालाई प्राथमिकता दिएको पाइदैन । त्यसैले तत्काल वार्ताको प्रभावकारी पहल जरुरी छ ।